Find #အလုပ်သင် #စာရင်းကိုင် ခေါ်ယူခြင်း in ရန်ကုန် on ipivi.com
#အလုပ်သင် #စာရင်းကိုင် ခေါ်ယူခြင်း
ရောင်းချသူ: ထွံလှာ ဒွာံန်း ပံ
ကြည့်သူအရေအတွက်: 257 (+2)
Training Charges 300,000 MMK
ဘာကြောင့် Trainee Accountant အဖြစ် အလုပ်သင် စာရင်းကိုင် လုပ်သင့်ပါသလဲ။
1) စာသင်ခန်းအတွင်းမှာပဲ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ကွန်ပြူတာများ၊ စာအုပ်များ၊ အထောက်အထားများကိုသာ ရေးသား စာရိုက်သွင်းနေရုံဖြင့် စာရင်းကိုင်အလုပ်များကို တာဝန်မယူနိုင်လို့ပါပဲ
2) စာသင်ခန်းထဲတွင်သာ ရေးသားကျက်မှတ်နေရုံဖြင့် စာရင်းကိုင်အလုပ်လျောက်ရာတွင် မိမိကို စာရင်းကိုင်အဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်မည့်လုပ်ငန်းရှင်များ ရှားပါးနိုင်သောကြောင့်
3) ဘွဲ့၊ အတွေ့အကြုံအပြင် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် စာရင်းကိုင်တစ်ယောက်ဆီမှ မျော်လင့်ချက်သည် သူ့လုပ်ငန်းအတွက် စာရင်းများကို တာဝန်ယူနိုင်ဖို့၊ တာဝန်ခံနိုင်ဖို့ ဖြစ်သောကြောင့်
စာရင်းကိုင်အလုပ်ရရှိဖို့ရန်မှာ - တာဝန်ယူနိုင်ဖို့၊ လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှု၊ စာရင်းသီအိုရီများကို လက်တွေ့ကျကျနားလည်မှု၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိစ္စများကို စိတ်ဝင်စားမှု၊ စေ့စပ်သေချာမှု၊ အသေးစိတ်လုပ်တတ်မှု၊ လျင်မြန်မှု၊ သွက်လက်မှု၊ တာဝန်ခံနိုင်မှု၊ စာရင်းနှင့်ပက်သက်သော အထွေထွေ ဗဟုသုတရှိမှု၊ စသည့် စသည့် မြောက်များလှသော လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အချင်းများ အထူးလိုအပ်ပါသည်။
ဒါကြောင့် Trainee Accountant အဖြစ် အရည်အချင်းပြည့်မှီသူများကို ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
Trainee Accountant များလျောက်ထားနိုင်ပါပြီ။
အလုပ်သင်စာရင်းဝန်ထမ်းများ ကို အောက်ပါ အခြေခံအချက်အလက် (၉) ချက်ပေါ်တွင်တိုင်းတာကာ ရွေးချယ်လေ့ကျင့်ပေးနေပါပြီ။
1. Communication - ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း
2. Responsibility - တာဝန်ယူခြင်း
3. Accountability - တာဝန်ခံခြင်း
4. Language - ဘာသာစကားနားလည်းခြင်း
5. Bookkeeping - စာရင်းစာအုပ်များ ထိန်းသိမ်းခြင်း
6. Accounting - စာရင်းပြုစုခြင်း
7. Finance - ငွေကြေးကိစ္စများစီမံခြင်း
8. Interest - စီးပွားရေးကိစ္စများ စိတ်ဝင်စားခြင်း
9. General Knowledge - အထွေအထွေဗဟုသုတရှိခြင်း
JPO - Job Partner One - 09-77-380-8547
Accounting Job Specialist Recruiters
Title : Trainee Accountant
https://www.facebook.com/groups/trainee.accountant/ — at ￼Job Partner One. 09 79 321 2011.
အမည်: #အလုပ်သင် #စာရင်းကိုင် ခေါ်ယူခြင်း